Yakavanzika Policy - Yepamberi Chigadzirwa Solution Technology Co, Ltd.
Kuchinja Simba Adapter
Yakatanga Chigadzirwa Solution Technology Co, ltd
APS yakazvipira kuchengetedza ruzivo rwemunhu newemunhu iwe rwaunopa kana uchishandisa webhusaiti yedu, kuti isu titeedzere mitemo nezvisungo zvine chekuita nekuvanzika kwevatengi uye kuchengetedzwa kwevatengi muunganidzwa, kushandiswa, kuchengetwa uye kuendesa kwe data rako. mureza.
Kuti uve nechokwadi chekuti une chivimbo chakazara mukubata kwedu data rako rega, iwe unofanirwa kuverenga nekunzwisisa izvo zvinopihwa zvePolisi Yakavanzika. Kunyanya, kana ukangoshandisa webhusaiti yedu, uchaonekwa uchibvuma, kubvuma, kuvimbisa nekusimbisa: Iwe unozvipira kuburitsa pachena ruzivo rwemunhu kwatiri nemvumo inodiwa; Iwe unoenderana nezvose zvirevo nemamiriro eichi Chakavanzika Policy;
Iwe unyoresa pane webhusaiti yedu uye ruzivo ruchaunganidzwa;
Unobvumirana neshanduko dzese kune yedu Yakavanzika Policy mune ramangwana;
Unobvumirana nevatinoshamwaridzana navo, vanobatana navo, vashandi, uye unogona kufarira zvigadzirwa nemasevhisi angave anonakidza kwauri (kunze kwekunge waratidza kuti haudi kugashira mameseji akadaro).
Kuunganidzwa nekugadziriswa kwePamoyo Dhata
Isu tinotora, maneja uye kuongorora wega data nemvumo yako. Kuti tikupe masevhisi edu, iwe uchafanirwa kupa rako pachako data uye zvisina kutaurwa mazita izvo zvatinotenda kuti zvakakosha kuti uwane mirairo yako uye nekuvandudza mabasa edu, kusanganisira asi kwete kuganhurirwa ku:
-Zita rako, murume kana murume, zera, zuva rekuzvarwa, nhamba yefoni, nhamba yefeksi, kero kana kero yekutumira, kero yeemail.
Chinangwa uye chinangwa chekutora rako pachako data uye risina zita ruzivo zvinotevera.
Kukupa iwe nemasevhisi edu kuburikidza newebsite yedu;
Paunoshandisa webhusaiti yedu, unogona kuona nekusimbisa hunhu hwako;
Rega iwe uwane manzwiro ako paunenge uchishandisa webhusaiti yedu;
Vashandi vedu vevashandi vanogona kutaura newe kana zvichidikanwa;
Statistics pakushandiswa kwewebhusaiti yedu;
Ita kuti zvive nyore kwauri kuti ushandise webhusaiti yedu;
Kuitisa tsvagurudzo yemusika kuvandudza zvigadzirwa zvedu, masevhisi uye zvemukati webhusaiti;
Unganidza ruzivo rwezviitiko zvedu, kushambadzira uye kusimudzira zvirongwa;
Kuteerera nemitemo, hurumende nehutongi zviremera, kusanganisira asi zvisina kuganhurirwa kuziviswa kwemunhu data uye zviziviso;
Isu isu nevatinoshamwaridzana navo, vanobatana navo, vashandi, vamiririri, vanobatsirana nevamwe kana vamwe vanhu vechitatu vanoshanda nesu kunze kwenyika maunogara tikwidziridze zvigadzirwa uye / kana masevhisi;
Ongorora, simbisa uye / kana ongorora yako kiredhiti, kubhadhara uye / kana chimiro zvine chekuita nemasevhisi atinopa;
Gadzira chero mirayiridzo yekubhadhara, yakananga kubhadhara uye / kana kurongwa kwechikwereti pane chako chikumbiro;
Inokutendera kuti ushandise account yako uye / kana kutigonesa kubvisa mari dzebasa dzakasarudzika kubva kuaccount.
Cookies / Kuchengeta uye Mamwe Matekiniki Nezve Kushandiswa kweWebhusaiti yedu
Paunoshanyira webhusaiti yedu, tinoshandisa Google Stats kuti tinyore mashandiro edu kuburikidza nemakuki. Cookie idiki dhata rinotumirwa kubhurawuza rako uye rinochengetwa pane hard drive yekomputa yako. Makuki anogona kungotumirwa kune hard drive yekomputa yako kana iwe ukashandisa komputa yako kuwana webhusaiti yedu.
Cookies anowanzo shandiswa kurekodha maitiro uye zvido zvevashanyi pavanotsvaga zvakasiyana zvinhu pane yedu webhusaiti. Idzo ruzivo rwunounganidzwa nekuki harina kunyoreswa pamwe chete manhamba uye harina data remunhu.
Cookies haigone kushandiswa kuwana data pane yako hard drive, yako email kero, uye yako yakavanzika data. Paunoshanyirazve webhusaiti yedu, unogona kusevha nhanho dzekunyoresa zvakare. Mazhinji mabhurawuza akafanogadzirirwa kugamuchira makuki. Unogona kusarudza kuseta bhurawuza rako kuti risabvume makuki, kana kukuzivisa kana makuki akaiswa. Nekudaro, kana iwe ukaisa kurambidzwa kwemakuki, unogona kusakwanisa kumisikidza kana kushandisa zvimwe zvinhu zvewebsite yedu.
Ukasarambidza kana kubvisa makuki, pese paunoshandisa komputa imwechete kuwana webhusaiti yedu (www.apstechgroup.com), dura redu rewebhu rinotizivisa kuti wakashanyira webhusaiti yedu, uye tinokuzivisa iwe nedata rako rekunyora uye yekubhadhara data. , kuunganidza ruzivo rwekushandisa, kutsvagisa musika, kufambira mberi, uye kutora chikamu mumabasa ekusimudzira.
Iwe unogona kushandura marongero pane bhurawuza rekomputa raunoshandisa kuwana webhusaiti yedu kusarudza kana kwete kugamuchira makuki. Kana iwe uchida, iwe unogona kushandura marongero pane ako browser. Kana iwe ukaisa zvaunofarira pane bhurawuza rako, unogona kugamuchira ese makuki, kugamuchira ma ziviso kubva kukuki, uye kunyange kuramba ese makuki. Nekudaro, kana iwe ukasarudza kusashandisa makuki kana kuramba makuki ese mubrowser yako, unogona kusakwanisa kushandisa kana kumisikidza zvimwe zvinhu zvewebhusaiti yedu, kana ungangoda kupinda zvekare ku data rako.
Sevha rako pachako data uye risina zita ruzivo
Iyo yega data uye isina zita ruzivo iwe yaunotipa kwatiri inongochengeterwa kudzamara chinangwa cheunganidzwa chazadzikiswa, kunze kwekunge chachengetwa zvinoenderana nemitemo inoshanda nemirau.
Webhu yekuongorora sevhisi (Google Analytics / Universal Analytics)
Tinogona kushandisa Google Analytics kana mamwe masevhisi pane yedu webhusaiti. Aya ndiwo masevhisi anopihwa nevechitatu mapato, anogona kunge achiwanikwa mune chero nyika pasirese (mune Google Analytics Google LLC iri muUS, www.google.com) uye izvo zvinotibvumidza kuyera uye kuongorora mashandisiro ewebhusaiti yedu ( pane isingazivikanwe hwaro). Nechinangwa ichi, makuki anogara aripo anoshandiswa, ayo akaisirwa nemupi webasa. Mubatsiri webasa haagamuchire (uye haachengete) chero dhata rako kubva kwatiri, asi mupi webasa anogona kuteedzera mashandisiro ako webhusaiti, sanganisa iyi ruzivo nedata kubva kune mamwe mawebhusaiti awakashanyira uye ayo anoteverwa neesevhisi sevhisi. mupi uye anogona kushandisa iri ruzivo kuzvinangwa zvaro (semuenzaniso kudzora kushambadza). Kana iwe wakanyoresa nemupi webasa, mupi webasa anozozivawo chitupa chako. Mune ino kesi, kugadziriswa kwe data rako pachako neanopa sevhisi ichaitwa zvinoenderana nemitemo yayo yekuchengetedza data. Mubatsiri webasa anotipa chete dhata rekushandisa kwewebhu webhusaiti (asi kwete chero ruzivo rwemunhu iwe).
Yemagariro Midhiya plug-ins
Uye zvakare, isu tinoshandisa plug-ins kubva pasocial network senge Facebook, Twitter, Youtube, Pinterest kana Instagram pamawebhusaiti edu. Izvi zvinoonekwa kwauri (zvinowanzoenderana nezviratidzo). Isu takagadzirisa zvinhu izvi kuti zviremare nekutadza. Kana iwe ukavaimisa (nekudzvanya paari), vanoshanda veaya akasiyana masocial network vanogona kunyora kuti iwe uri pane webhusaiti yedu uye kupi pawebhusaiti yako iwe uri chaizvo uye vangashandise ruzivo urwu kuzvinangwa zvavo. Uku kugadziriswa kwe data rako rega kunoisa mune mutoro weanoshanda opareta uye kunoitika zvinoenderana nemitemo yayo yekuchengetedza data. Isu hatigashire chero ruzivo nezve iwe kubva kune anoshanda opareta.
Isu takatora matanho akakodzera ehunyanzvi uye esangano kuchengetedza nzira dzako dzekuchengetedza kubva pasingabvumidzwe kuwana nekushandisa zvisirizvo senge mitemo yemukati, kudzidziswa, IT uye network chengetedzo mhinduro, kudzora kwekuwana uye kurambidzwa, kunyorera kwevanotakura data uye kufambisa, kuongorora.
Kusungirwa Kupa Ruzivo Rwega Kwatiri
Muchirevo chehukama hwedu hwebhizimusi iwe unofanirwa kutipa chero dunhu rako iro rinodikanwa kupedzisa uye kuita kwehukama hwebhizinesi uye nekuitwa kwezvisungo zvedu zvechibvumirano (sekutonga, hapana mutemo wepamutemo wekutipa data) . Pasina ruzivo urwu, isu kazhinji hatizokwanise kupinda kana kuita chibvumirano newe (kana sangano kana munhu waunomiririra). Uye zvakare, webhusaiti yacho haigone kushandiswa kunze kwekunge rumwe ruzivo rwaburitswa kuti ruite data traffic (semuenzaniso IP kero).
Kugadziriswa kweiyi Dziviriro Dhata Chirevo
Tinogona kugadzirisa Chirevo chekuchengetedzwa kwedata chero nguva pasina ziviso isati yaitika. Iyo yazvino vhezheni yakaburitswa pawebhusaiti yedu inozoshanda. Kana iyo Data Dziviriro Chirevo chiri chikamu chechibvumirano newe, isu tinokuzivisa iwe nee-mail kana imwe nzira yakakodzera kana paine shanduko.
Nhare mbozha Car Charger , Plug Adatpter Pcba , Mobile Charger , Desgined USB Charger , Universal Pcba , Fast Charge Car Charger With Cable ,